Gudoonka DKMG ah ee Gedo "Waajibaad keenu waa inaan Tagnaa Bardheere &…" – SBC
Gudoonka DKMG ah ee Gedo "Waajibaad keenu waa inaan Tagnaa Bardheere &…"
Garbahaarey-Maxamed Cabdi Kaliil gudoomiyaha DKMG ah ee Gobolka Gedo ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in ay ku hareereysan yihiin xarakada Alshabaab Magaalada Garbahaarey xarunta Gobolka Gedo oo ay ku sugan yihiin ciidamada DKMG ah .
Waxa uu sheegay gudoomiye Kaliil in ay dhamaatay xiliyadii ay Xarakada Alshabaab dhibijireen shacabka reer Gedo islamarkaana hada ay soo gaartay Dowlada KMG ah guud ahaan gobolkana ay ku wajahan yihiin maalmaha soosocda.
“Way dhamaatay dhibaatooyinkii ay Alshabaab shacabka ku hayeen, waxana ku wadnaa howlgal lagu soo afjarayo” sidaasi waxaa yiri Gudoomiyaha DKMG ah ee Gobolka Gedo.
Gudoomiyaha oo la hadlayay SBC International ayaa intaasi ku daray in deegaanada uga harsan Gobolka Gedo ay si aad ah u yar yihiin islamarkaana waqtiyada soosocda ay gaarayaan,
“Waajibaadkeyagu waa in aan tango degmooyinka haray ee kala ah Baardheere iyo Buurdhuubo, waana ku wajahannahay Waqtiyada Soosocda” ayuu yiri Maxamed Cabdi Kaliil gudoomiyaah DKMG ah ee Gobolka Gedo.
Gudoomiye kaliil ayaa been iyo wax la dhoodhoobay ku tilmaamay in ay ciidamo shisheeye dagaalka dhankooda kula jiraan oo ay garab siinayaan, waxaanu sheegay in hadalada sheegaya in ciidamo itoobiyaan ah ay la socdaan Ciidamada DKMG ah ay yihiin kuwa ka soo yeera marka laga taagroonaado dhinacyada la dagaalamaya.
Sikastaba ha ahaatee xaalada haatan ee Garbahaarey ayaa ah mid kacsan iyadoona ay ilo wareedyo halkaasi ku sugani sheegayaan in dagaalo goos goos ah ay ka jiraan afaafka hore ee magaaladaas, in kastoo uu been abuur ku tilmaamay gudoomiyaha in aanay jirin wax Alshabaab ah oo Galbahaarey ka agdhow.
SBC International Garbahaarey.